इतिहास लुकाएर लुक्दैन: यसरी मारेका थिए माओबादीहरुले शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीलाई ! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
इतिहास लुकाएर लुक्दैन: यसरी मारेका थिए माओबादीहरुले शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीलाई !
मर्स्याङ्दी नदीमा मिसिनुअघि पाउँदी खोलाले पूर्व-पश्चिम तन्किएको फराकिलो उपत्यका बनाएकी छन्। यसै उपत्यकाको उत्तरी विशाल पाखोलाई दुराडाँडा भनिँदोरहेछ; शाह वंश तथा नेपाल राज्यकै उद्गमस्थल र मध्यपहाडको शिक्षा र प्रगतिशील विचारको थलो। इतिहास र संस्कृतिले उर्वर यस माटोका बौद्धिक उत्पादन थिए शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारी ।
हत्याको चरित्र तथा मरण स्थलबारे गाउँबासीबाहेक अरूलाई जानकारी त्यो तस्बिर मात्र थियो। तसर्थ त्यहीँ पुग्दा केही थप कुरा थाहा भयो। मुक्तिनाथ सरको बिदाइको यो स्थललाई नेपालका हिमालहरूले पहरा दिएका रहेछन्; शिर ठाडो गरेर हेर्नुपर्ने एकातिर मनास्लु, हिमालचुली, बौद्ध र डा.हर्क गुरुङले नाम दिएको ङादीचुली।
अर्कातर्फ लमजुङ हिमाल, माछापुच्छ्रे तथा सम्पूर्ण अन्नपूर्ण हिमशृंखला। मानौं व्यक्तिहत्याको शृंखलालाई त्रास, अन्यौल र मौनतामा डुबेको बौद्धिक जगत बाबजुद नेपालका हिमालय साक्षी छन्। बिर्सन दिने छैनन्।
किन व्यक्ति हत्या ?
मुक्तिनाथ सरको हत्यापश्चात धेरै वर्षसम्म काठमाडौंको पद्मकन्या कलेजको एउटा सानो कोठामा स्मृतिसभा आयोजना गर्न मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठान बाध्य रह्यो। नागरिक अगुवा र राजनीतिज्ञ बिरलै आउने त्यो कार्यक्रममा मुख्यतः आफन्त र विस्थापित गाउँबासीको उपस्थिति रहने गर्थ्यो। यसपाला दुराडाँडा गाउँकै पाणिनी संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको प्रांगणमा समारोह आयोजना भयो, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय नेताको उपस्थितिमा। तर पनि सहभागिता पातलो नै रह्यो। भयको राज भएको गाउँबाट धेरै पलायन भइसके भने अझै पनि स्थानीय तवरमा भौतिक, सार्वजनिक, राजनीतिक हिंसाको डर छँदैछ। मुक्तिनाथ सरको हत्यापश्चात धेरै वर्षसम्म काठमाडौंको पद्मकन्या कलेजको एउटा सानो कोठामा स्मृतिसभा आयोजना गर्न मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठान बाध्य रह्यो। नागरिक अगुवा र राजनीतिज्ञ बिरलै आउने त्यो कार्यक्रममा मुख्यतः आफन्त र विस्थापित गाउँबासीको उपस्थिति रहने गर्थ्यो। यसपाला दुराडाँडा गाउँकै पाणिनी संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको प्रांगणमा समारोह आयोजना भयो, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय नेताको उपस्थितिमा। तर पनि सहभागिता पातलो नै रह्यो। भयको राज भएको गाउँबाट धेरै पलायन भइसके भने अझै पनि स्थानीय तवरमा भौतिक, सार्वजनिक, राजनीतिक हिंसाको डर छँदैछ। नत्र हिंसाविरुद्ध गरिएको त्यो स्मृति समारोहमा सयौंमात्र होइन, हजारौं उपस्थित हुने थिए। आउँदा वर्षहरूमा होलान् पनि।
अनि कस्तो विडम्बना! काठमाडौंस्थित नागरिक समाजले सही र गलत छुट्याउन सकेन वा चाहेन। गाउँघरमा भएको हिंसाबारे एकरत्ति संवेदनशीलता देखाएन। माओवादीको ‘जनयुद्ध’ का बेला गरिबीले विद्रोह जन्माएको भन्ने अपर्याप्त तर्क गर्दादेखि आज अन्य दलहरू मिलेर माओवादीलाई एक्ल्याउँदैछन् भन्ने कमसल विचारसम्म सामाजिक जवाफदेहिताको अभाव महसुस हुन्छ। अनि कस्तो विडम्बना! काठमाडौंस्थित नागरिक समाजले सही र गलत छुट्याउन सकेन वा चाहेन। गाउँघरमा भएको हिंसाबारे एकरत्ति संवेदनशीलता देखाएन। माओवादीको ‘जनयुद्ध’ का बेला गरिबीले विद्रोह जन्माएको भन्ने अपर्याप्त तर्क गर्दादेखि आज अन्य दलहरू मिलेर माओवादीलाई एक्ल्याउँदैछन् भन्ने कमसल विचारसम्म सामाजिक जवाफदेहिताको अभाव महसुस हुन्छ। अनि; कस्तो आम जनताको नजरअन्दाज कि, सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ भनेर ठोकुवा गर्ने पश्चिमा नियोगका परामर्शदाता हुन पुगेका राजनीतिशास्त्रीहरू माओवादीको शिविरमा तैनाथ लडाकु दस्ताको कुरै गर्न चाहेनन्।
समाचार साभार: Gulfact
Previous बुबा र आमा दुवैलाई गुमाएका यि नानीहरु, पढाई खर्च नभएपछि यस्ताे :शेयर गराैं
Next कुवेतको नि´र्माणस्थलमा पु`रिएर ४ जना नेपालीको मृ´त्यु, ३ जना अझै बे´पत्ता (भिडियोसहित)